Nnukwu esemokwu ihu igwe dị n'etiti Sydney na United States | Netwọk Mgbasa Ozi
Nnukwu esemokwu ihu igwe dị n'etiti Sydney na United States
Igwe ihu igwe na-agbanwe ma ọ na-eme ya n'ụzọ nzuzu. N’izu gara aga, anyị ejirila ebili mmiri na-ajụ oyi, mmiri mmiri ozuzo na nnukwu mmiri ozuzo. United States ga-ekwupụta ọnọdụ nke ọnọdụ mberede n'ihi oke snow nke nwere ifufe siri ike na oke oyi. Otú ọ dị, na Sydney (Australia) ọ rutewo okpomọkụ kasị mma n'afọ 79 gara aga.
Kedu ihe na-eme mgbanwe mgbanwe ndị a na ọnọdụ okpomọkụ?
1 Elu na ala okpomọkụ
2 A na-enweta ihe ndekọ ọhụrụ
3 N’ọgwụgwụ nke ọzọ nke ụwa
Elu na ala okpomọkụ
Ihe mbu iji dokwuo anya (maka ndị nwere obi abụọ ma ọ bụ na ha amaghị) na Southern Hemisphere ugbu a bụ oge ọkọchị. Ọchịchọ nke ụzarị anyanwụ na-ada obere steepụ karịa na Northern Hemisphere, yabụ Anyanwụ na-ekpo ọkụ karịa. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ụwa dị nso na Sun karịa oge ọkọchị, ihe dị ezigbo mkpa ma bụrụ ihe na-ekpebi ọnọdụ okpomọkụ bụ ebumnuche nke ụzarị Earthwa. Ọ bụrụ na ụzarị anyanwụ na-akụkarị n'akụkụ ụwa, ọ ga-adị ọkụ karịa ma ọ bụrụ na ha ejiri nwayọọ na-akụ.
Ugbu a, n'oge oyi, anwụ na-acha ha na-agbadosi ike na mpaghara ndịda na steepụ na mgbago ugwu. Agbanyeghị nke a, oge ọkọchị Southern Hemisphere dị ugbu a na-enwe ọnọdụ dị oke egwu na oke ọkụ.
Na Sydney ọ dịla ndekọ okpomọkụ nke ogo 47,3, nke kasị elu n'ime afọ 79. Na mgbakwunye, enyerela ihe mberede mberede n’obodo ukwu nke obodo ukwu ahụ. Na Sọnde gara aga, amachibidoro ịgba oku n’obodo niile iji gbochie mgbasa nke ọkụ.
Ebumnuche nke ndị ọrụ nchekwa nke Sydney, dị ka nke a na-eme kwa afọ n'Australia, bụ iji belata ihe egwu nke oke ọkụ, ebe ọ bụ na mba ahụ na-ata ahụhụ dị egwu nke mfu nke ala na-eme nri n'ihi oke mbibi ala na-aga n'ihu ala ịkpa.
Na Sọnde ahụ, okpomọkụ na-achọ ịkarị nke mba ahụ tara ahụhụ na 1939 mgbe o ruru ogo 47,8. Bureaulọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe kwadoro nke a na-ekpesi ike na Penrith, nke dị na ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ nke Sydney.
N'ihi ọkụ ọgbụgba ahụ, ọtụtụ ihe onwunwe dị na steeti Victoria na South Australia bibiri.
A na-enweta ihe ndekọ ọhụrụ
N'ihe dị ka n'ọnwa Septemba 2017, a dọrọ ndị Australia aka na ntị ịkwadebe maka oge ọkụ ọkụ dị egwu n'ihi otu oge oyi na-adịkarị na akụkọ ntolite Australia na oke okpomọkụ a na-atụ anya ya.
N’agbata ọnwa Disemba afọ 2016 na Febụwarị afọ 2017, ihe karịrị narị abụọ na iri edekọtara gbasara ihu igwe gbasapụrụ n’Ọstrelia niile ebili mmiri, ọkụ ọgbụgba na idei mmiri n'oge ọkọchị.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu na ọ bụ mgbanwe ihu igwe kpatara ọnọdụ okpomọkụ a, gụnyere nke oké osimiri. Mgbanwe ihu igwe na-ewe ọnọdụ ihu igwe nkịtị na oke ma na-abawanye ugboro ole ihe omume dịka ebili mmiri, ebili mmiri, ọkọchị na idei mmiri.
Ọbụna onye France na-egwu egwuregwu tennis nke na-egwu egwuregwu asọmpi lara ezumike nká n'ihi oke okpomọkụ. Ọ bụ oge mbụ na ọrụ ya niile ọ lara ezumike nká.
N’ọgwụgwụ nke ọzọ nke ụwa
Na nsọtụ ọzọ nke ụwa tara ahụhụ naanị ya. Mgbe n’Australia ọ na-ekpo ọkụ nke ukwuu na ọkụ na-agba n'oké ọhịa, na United States oke ebili mmiri emeela nke kpatara oke ifufe ma kwupụta ọnọdụ nke ọnọdụ mberede.
N'akụkụ ụfọdụ nke United States, iru okpomọkụ ruo -37 Celsius.
Maka oge mbụ n'ime afọ 28, steeti Florida, otu n'ime ndị kachasị ekpo ọkụ na East Coast, hụrụ ka snow na-ada n'isi obodo steeti ahụ, Tallahassee. A na-akpọ oké ifufe a bọmbụ meteorological nke ndị ọkà mmụta sayensị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụwa ekewaala ihu abụọ na ihu igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Nnukwu esemokwu ihu igwe dị n'etiti Sydney na United States
Mayón ugwu mgbawa na Philippines ga-agbawa
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ugwu ọkụ